အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ မရ်ဂျာများ၏ အဖြေများ
ကွန်ပျူတာ ဂိမ်း ကစားခြင်း
အောကျတိုဘာ ၂၈, ၂၀၂၁ - ၅:၄၀ ညနေ
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မါ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ထံ ယခုနှစ် (၂၀၁၂) အောက်တိုဘာလ က မေးထားသည်မွေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဂိမ်း ကစားခွင့် ရှိပါသလား ? အဖြေကို အောက်တွင် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
مشکلات جنسی جوانان ၏ မြန်မာ ဘာသာပြန် ဒုတိယ ပိုင်း ၊ အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး
ဖဖေျောဝါရီ ၉, ၂၀၂၀ - ၁၁:၀၄ ညနေ
အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ရောသားထားသည့် (مشکلات جنسی جوانان) ၏ မြန်မာ ဘာသာပြန် ဒုတိယ ပိုင်း အား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
مشکلات جنسی جوانان ၏ မြန်မာ ဘာသာပြန် ပထမပိုင်း ၊ အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး
ဖဖေျောဝါရီ ၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၃၈ ညနေ
အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ရောသားထားသည့် (مشکلات جنسی جوانان) ၏ မြန်မာ ဘာသာပြန် ပထမပိုင်း အား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သဝါစိုလ်လုပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သိချင်ပါတယ်?
သဝါစိုလ်လုပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သိစေရန် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) ကျမ်း မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တရားတော်အရ အရွယ်ရောက်ပြီးနောက် ထမ်းဆောင်ရမည့် သာသနာ့ တာဝန်များ
အောကျတိုဘာ ၃၀, ၂၀၁၆ - ၆:၂၃ ညနေ
တရားတော်အရ အရွယ်ရောက်ပြီး နောက် ထမ်းဆောင်ရမည့် သာသနာ့ တာဝန်များ မှာ အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စ သုံးခု အတွက် ဝါဂျစ်ဗ် မပြုမနေရ ဖြစ်သွားပေသည်။
တရားတော်အရ အရွယ်ရောက်ခြင်း ၏ လက္ခဏာရပ်များ
အောကျတိုဘာ ၃၀, ၂၀၁၆ - ၆:၁၉ ညနေ
တရားတော်အရ အရွယ်ရောက် ခြင်းဆိုသည်မှာ ကလေးဘဝ ကုန် ဆုံး သွားပြီး ရှရီအသ် တရားတော်၏ ဥပဒေများ ကို လိုက်နာရမည့် အရွယ်သို့ ဆိုက်ရောက် လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားတော်အရ အရွယ်ရောက်လာလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခာ အချက် သုံးချက်မှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မိုဂ်ျသဟစ်၏ ဖသ်ဝါ ကို ရယူနိုင်သည့်လမ်းများ
အောကျတိုဘာ ၂၈, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၂ ညနေ
မိုဂ်ျသဟစ်၏ ဖသ်ဝါ ကို ရယူနိုင်သည့်လမ်း မှာ (၄) လေးလမ်း ရှိပါတယ် ။
မရ်ဂျာများနှင့် အိုလမာယေ ရှီအာ တို့၏ အဖြေတစ်ချို့ .......
မေ ၁၂, ၂၀၁၄ - ၈:၄၄ နံနကျ
မရ်ဂျာများနှင့် အိုလမာယေ ရှီအာ တို့၏ အဖြေတစ်ချို့ ....... အား fb စာမျက်နှာ တစ်ခုမှ စာဖတ်ချစ်ပရိတ်သတ်များအတွက် အဖိုးတန်ပြီး၊ ဗဟုသုတ ရမည်ဟု သုံးသပ်မိသဖြင့် ကျွန်တော်များ အဗ်နာ သတင်း ဌာန အဖွဲ့မှ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
အကယ်၍ လူပျို၊အပျိုအချိန်တွင် အိမ်ထောင်ပြုရန် ငွေရေးကြေးရေး(ဝင်ငွေ) အဆင်မပြေ၊မတတ်နိုင်ပါက မည်ကဲ့သို့နေထိုင်ရန် အမိန့် ရှိပါသနည်း
ဖဖေျောဝါရီ ၁, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
နာမဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများ (မိန်းကလေးများ ) ၏ ဝတ်ဆင်မှု
ဇနျနဝါရီ ၂၇, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
နာမဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများ (မိန်းကလေးများ ) နှင့် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဇနျနဝါရီ ၂၄, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာဆရက်အလီ ခါမေနာအီ ရုံး ၊ကွမ်း ၏ အဖြေ နှစ်ခု
ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုသူ အေမာမ် မေ ဂျမာအတ်၏ စည်းကမ်းများ နှင့် ကွယ်လွန်သွားသည် မိုဂ်ျသဟစ် ၏ သက်္ကလီးဒ်
စကျတငျဘာ ၁၉, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ်အလ် အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး
အေစ်သေဖ်သာအ်ဟဇရတ်အာယာသွလ်လ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး မှမေးခွန်းအချို့နှင့်အဖြေအချို့ဖြစ်ပါသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)သတင်းဌာန၊အဗ်နာ
အေစ်သေဖ် သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ် အွဇ်မာ ဆရက် အလီ ခါမေနာအီ
အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီမှမေးခွန်းအချို့နှင့်အဖြေအချို့ဖြစ်ပါသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)သတင်းဌာန၊အဗ်နာ
ဇူလိုငျ ၁၅, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေစ်သေဖ်သာအ် ၊ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီမှမေးခွန်းအချို့ နှင့်အဖြေအချို့ဖြစ်ပါသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)သတင်းဌာန၊အဗ်နာ
မေးခွန်း (၂) ခု အဖြေ (၂)ခု
အောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်း (၂) ခု နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီရုံး ၊ကွမ်း ၏ ဖြေကြားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
သောကြာနမာဇ် နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဖြေတစ်ခု
မေ ၃၀, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
သောကြာနမာဇ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးထားသည့် အမေးအတွက် အဖြေမှ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီးရုံး၏ဖြေကြားချက်၏ဖြေကြားချက်ဖြစ်ပါ သည်။အဗ်နာချစ်မိတ်ဆွေများအတွက် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်ဆိုမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးနှင့်အဖြေ
ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာလွတ်ဖ် ဖွလ်လ္လာဟ် ဆွာဖီ ဂိုလ်ဗိုင်ဂန်နီ ၏ဘာသာပြန်ဆိုမှု နှင့် ပတ်သက်သည့် အမေးနှင့်အဖြေ အား မြန်မာရှီအာ မွတ်စလင် ဆိုက်မှ တိုက်ရိုက် ကူးယူးတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဂျိုမာနမာဇ်တွင် အလှည့်ကျ မောင်လာနာ တစ်ယောက် တည်းသာ ဖတ်ပေးပါသည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ကျန်မောင်လာနာများ မလာကြချေ
ဂျိုမာနမာဇ်တွင် အလှည့်ကျ မောင်လာနာ တစ်ယောက် တည်းသာ ဖတ်ပေးပါသည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ကျန်မောင်လာနာများ မလာကြချေ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာအလ်ဟဂ်ျနာစေရ်မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီးရုံး ၏ ဖြေကြားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
သောကြာနမာဇ်တွင် ရှေ့ဆောင်အေမာမ်မှ ကူနူးသ် မှားဖတ်ခြင်း
သောကြာနမာဇ် တွင် ရှေ့ဆောင်အေမာမ်မှ ကူနူးသ် မှားဖတ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟဇရတ် အာယာသွလ်လ္လာဟ် ခါမေနာအီရုံး ၊တီဟီရန်၏ ဖြေကြားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုသူ အေမာမ် မေ ဂျမာအတ်၏ စည်းကမ်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အမြင်
ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုသူ အေမာမ် မေဂျမာအတ်၏ စည်းကမ်းများ ကို အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အနေဖြင့် မိမိ၏ သောင်ဇီးလ်ဟိုလ်မဆာအေ ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။